SAMOTALIS: DHAMBAAL TACSI AH OO OO UU DIRAAYO MUSTASHAAR AXMED CARWO, GEERIDA MARXUUMAD CAASHA SH YUUSUF SH MADAR
DHAMBAAL TACSI AH OO OO UU DIRAAYO MUSTASHAAR AXMED CARWO, GEERIDA MARXUUMAD CAASHA SH YUUSUF SH MADAR
L-taliayaha Madaxweynaha JSL Mustashar Axmed Carwo Isagoo ku hadlaaya magaciisa iyo ka xaaskiisa Amal Cumar Carte iyo ka reer Cabdi Carwo waxa uu tacsi u dirayaa Qoyskii, Qaraabadii, Eheladii, Asxaabtii ay ka baxday Marxuumad Caasha Sh Yuusuf Sh. Madar oo maanta 24/02/2016 ku geeriyootay Hargeysa.
Marxuumaddu waxay ahayd muwaadiniyad qayb lexaad leh oo taageero maadi ah iyo fikirba ka qaadatay halgankii SNM. Ruux xili walba u taagnayd gudashada waajibka qaran oo aad u dal iyo dad jecel.
La-taliyaha Madaxweynuhu waxa uu marxuumadda ALLE uga baryayaa inuu naxariistiisa janatu fardawsa ka waraabiyo. Qoyskii, Qaraabadii, Eheladii, Asxaabtii iyo guud ahaan gobalka Maroodi jeex ee ay ka soo jeeday, iyo gaar ahaan reer Sh Madar, inuu Alle waafajiyo samir iyo duco.